Avy amin'ny WWE Rumor Mill: Olona hafa hamafana ny tantaran'ny WWE? - Wwe
Avy amin'ny WWE Rumor Mill: Olona hafa hamafana ny tantaran'ny WWE?
Voajanahary ho an'ireo izay tsy mankasitraka ny varahina ambony WWE ny hiditra anaty lisitra mainty ary manana ny firaketana ny fisiany nanjavona mandrakizay avy amin'ireo boky tantara. Hitanay izany fitsaboana izany nihaona tamin'i Hulk Hogan, Jimmy 'Superfly' Snuka, Chris Benoit ary olona maro hafa, izay tsy misolo tena ny soatoavin'ny orinasa, miaraka amin'ireo fihetsika maharikoriko ataon'izy ireo ivelan'ny faribolana. Araka ny tatitra iray momba ny Wrestlingnews.co , WWE dia nanala ny soritry ny vehivavy hafa rehetra. Izany dia vehivavy mpitsara voalohany tany WWE fantatra amin'ny anarana hoe RIta Chatterton / Rita Marie.
Rita Chatterton dia mpitsara nandritra ny taona 80 ho an'ny fampiroboroboana, izay nalaza tampoka taorian'ny nisehoany tao amin'ny fampisehoana nataon'i Geraldo Rivera 'Now it can be told', smack dab eo afovoan'ny tantara ratsy nataon'ny WWE momba ny steroid. Nilaza izy fa nanolana azy i McMahon. Tsy vitan'ny hoe nanamavo ny ankamaroan'ny tantarany, i Vince sy i Linda McMahon dia nametraka fitoriana azy sy ny orinasan-gazety, noho ny 'fahakiviana ara-pihetseham-po mafy'.
Ny tatitra dia milaza ny Mae Young Classic, izay nantsoin'ny orinasa Jessika Carr ho mpitsara vehivavy voalohany tamin'ny tantaran'ny WWE. Lita dia nanisy firesahana momba an'i Carr ho mpitsara vehivavy voalohany hatramin'ny taona 80, nefa tsy nanonona anarana. Toa toerana maharary ho an'ny orinasa i Chatterton ary ny fisiany dia nofafana tamin'ny boky tantara ho an'ny tsara.
Mihaona amin'ny vehivavy ofisialy voalohany @WWE mpitsara iza no hitanao manomboka IZAO ALATSINY ao amin'ny @MaeYoungClassic ... @WWELadyRefJess ! pic.twitter.com/Pcss11kyTS
- WWE (@WWE) 25 Aogositra 2017
Mino izahay fa i Carr dia amin'ny fotoana tsara kokoa amin'ny orinasa ary hanohy hanana asa lava be sy malaza amin'ny orinasa izy. Ireo boky firaketana dia hampiseho azy ho mpivarotra fironana.
Satria tsy nitovy fihazakazahana tamin'ny raharaha nataon'i Hogan na Snuka i Chatterton, miahiahy aho fa misy olona tena tsy hahita ny anarany ao amin'ireo boky firaketana. Raha ny momba ny filazany, olona maro an'arivony no narian'izy ireo nandritra ny taona maro, ary noho izany dia nino aho fa noforonina izy ireo. Tsy nametraka fiampangana an'i Vince McMahon akory izy!
famantarana fa saro-piaro aminao ny olona iray
barry gibb vady linda fotsy
zavatra holazaina amin'ny olona momba ny tenanao
tsy hiresaka amiko ny vadiko
tsy raharahako na inona na inona intsony